China Quarzite Ime Mma Naturalchọ Mma Nkume Nkume ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | DFL
No.dị nọmba :DFL-1308YHZPB(T)
:Dị: Mbadamba ụrọ
Nha: 10 * 40cm
Nodị No.:DFL-1308YHZPB (T)
N'elu Ọgwụgwọ: Kewaa
Nha:10 * 36cm; 10 * 35cm
Ngwaahịa: Panels Veneer Stone> Super Thin Stone
Ihe ndozi ime Quarzite Nkume Nkume Nkumenwere ụba nke ederede na agba nke na-agbakwụnye mmetụ nke enweghị oke oge na ime ụlọ ọ bụla ma ọ bụ mpụga. Enwere ike ijide oge na ike iji mee ihe, enwere ike iji ngwaahịa okike mepụta ụdị agbatị na-adịgide adịgide. DFLstoneNkume Nkume rube isi na njirimara ndị a:
Na-achọ ezigbo mma Ikike Stone mkpuchi Manufacturer & soplaya? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. A na-ekwe nkwa Dechọ Mma Ime Ime na-ekwe nkwa dị mma. Anyị bụ ndị China si Factory nke Natural cochọ Mma Stone. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Anyị bụ ezigbo ọrụ maka nkọwa niile banyere ndị ahịa anyị ịtụ ahịa n'agbanyeghị ogo akwụkwọ ikike, ọnụ ahịa afọ ojuju, nnyefe ọsọ ọsọ, na nkwukọrịta oge, nkwukọrịta afọ ojuju, usoro ịkwụ ụgwọ dị mfe, usoro mbupu kachasị mma, mgbe ọrụ ahịa wdg. ntụkwasị obi kachasị mma maka ndị ahịa anyị niile. Anyị na ndị ahịa anyị, ndị ọrụ ibe anyị, ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike ka ọdịnihu dị mma.
Pink Quarzite Ekechi Nkume Nkume
Natural Rough Face Ledgerstone Systems maka Ọpụpụ ...
Ewu ewu na mpụga mgbidi rusty Quarzite Ledgestone ...